Otu Internet ekwentị ma ọ bụ mebere nọmba ekwentị-enye gị ohere na-ewetara a Obodo nọmba-ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe anụ ahụ gị na ọnọdụ. Ma ị na-n'ime ụgbọala gị, n'ụlọ, ma ọ bụ na ụlọ ọrụ, ọ ichegharị oku, na nwere gị nọmba mgbanaka sequentially ma ọ bụ n'out oge, nke ọ bụla bụ adaba n'ihi na gị. Ọ nwere ike melite na nkeji na-arụ ọrụ na ihe ọ bụla dị na ekwentị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-aba na mmasị, ala ma ọ bụ nnọọ na ị chọrọ dịkwuo gị nzuzo, ị nwere ike mgbe niile ikpochapụ gị internet nọmba ekwentị kpamkpam. Ọ dịghị ewe oge dị ukwuu na-ewepụ gị nọmba. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ntuziaka.
Olee otú Iji Kọwaa Your Internet ekwentị Number
Nzọụkwụ # 1:
Site kpọmkwem ebe ma ọ bụ search engines, iji ihe ọ bụla online iwepụ ngwá ọrụ nke pụrụ inwe ozi gị. Google akwụkwọ ndekọ aha iwepụ ngwá ọrụ ka ihe atụ, si ehicha niile nke gị data si Google searches. Ndị ọzọ search engines pụrụ inwe ihe ma ọ bụ obere yiri atụmatụ.
Nzọụkwụ # 2:
Directories bụ otu n'ime ihe ndị kasị ebe na internet na-egosipụta ozi gị, chọọ ha ma na-arịọ ha ka ha wepụ ya. N'ọnọdụ ka ukwuu, o nwere ike ọ na-egosi site na search engines, ma ọ ka ga na-si n'ebe. Iburu n'uche na saịtị ọ bụla dị iche iche, ya mere ọ dị mkpa inyocha.
Nzọụkwụ # 3:
Iji wepu ozi gị, na-eji a na-akwụ ụgwọ ọrụ. E nwere iri aha tacking ngwaọrụ na dị oké ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ maka. Aha Ọnọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ụlọ ọrụ ndị na-enyere wepụ ozi gị n'ihi na ọ nwere ikike nọgidere wepụ na nyochaa ọ bụla ọmụma nke nwere ike pụta e mesịrị na. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-aga n'ihu nlekota oru, ị chọrọ ịkwụ ụgwọ a kwa ọnwa ego.
Olee otú Iji Kọwaa ekwentị Nchekwa Na Android
Mbadamba na ekwentị mkpanaaka nwere ibu esịtidem ebe nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nke ohere maka data ma ọ bụ ngwa, e nwere Atụmatụ i nwere ike iji onwe elu ohere.
Nzọụkwụ # 1: Lelee Olee otú Ọtụtụ Space I Nwere Free
Iji ego, na-emeghe Ntọala. Gaa SD & ekwentị nchekwa, na lelee Internal ekwentị nchekwa na E Nwere ohere:
Nzọụkwụ # 2: Uninstall égwu na ị na-eji
Wepụ ngwa ị na-adịkwaghị mkpa bụ otu n'ime ndị kacha ụzọ onwe elu megabytes nke ohere. Gaa na Ntọala, na mgbe ahụ họrọ égwu na lastly, iwepụ na-enweghị isi software.
Nzọụkwụ # 3: igbubilata ma ọ bụ ịkpali gị foto
Pictures-a otutu data ohere, n'ihi ya, mgbubilata ma ọ bụ na-akpụ akpụ ha ka ha a na kọmputa na draịvụ ike ga-abụ ezigbo echiche. Ichekwa ha ka ígwé ojii, dị ka Dropbox, Picasa, Flickr, ma ọ bụ Google+, bụ ihe ọzọ na nhọrọ. Alternatively, ngwa dị ka Ọkara Image Ada Ada ebelata size na mkpebi nke gị ihe oyiyi.
Nzọụkwụ # 4: Wepụ Videos
Videos ogide a otutu ohere na otú na-akpali ha ka ígwé ojii, gị na kọmputa, na bulite ndị YouTube nwere ike inyere a otutu.
Nzọụkwụ # 5: Hichapụ Music
Ọ bụrụ na ị depụtaghachiri ọtụtụ music na ngwaọrụ gị, ha na-a otutu ohere na n'ikpeazụ. Kama nke na-akpakọba gị faịlụ, tụlee music gụgharia ọrụ onwe elu gị nchekwa.
Nzọụkwụ # 6: Hichapụ Downloads
Lelee gị download ndekọ na-ahụ ma ọ bụrụ na ị ebudatara ụfọdụ nnukwu faịlụ. Dị otú ahụ faịlụ nwere ike-ehichapụ, ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa ha ọzọ.
Nzọụkwụ # 7: Lee N'ihi na ndị ọzọ Large nchekwa na Files
Gbalịa apụ na Ntọala, na mgbe ahụ égwu, mgbe ahụ, lastly aga Misc. A n'ụzọ a, ị ga-n'ihu na faịlụ. Ọ bụrụ na e nwere faịlụ na-adịghị mkpa, wepụ ha ozugbo. Iji hụ ihe kpọmkwem bụ gị ohere nchekwa na-na-arụ; ga-esi na ngwa dị ka Disk ojiji & Nchekwa analyzer Ji nchekwa.
Nzọụkwụ # 8: Kọwaa Cache
Na ihe Android ekwentị, na-agbalị ikpochapụ cache na "Jikwaa My Ngwa." Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone, pịa ngwa na e depụtara n'okpuru "ojiji" iji ego ma mmezi data faịlụ nwere ike-ehichapụ.
Nzọụkwụ # 9: Wepụ Bloatware
Bloatware bụ a mkpokọta aha mere maka na-abaghị uru ngwa ọdịnala na ọ ekwentị ụgbọelu ma ọ bụ emeputa ka-eji arụnyere. Na mbụ, ndị a na-abaghị uru ngwa-apụghị wepụrụ, ma ọ bụrụ na ị bụ obi Chọpụta isi iyi, ị ga-enwe ike tufuo ihe bloatware.
Olee otú ikpochapụ ekwentị nchekwa iOS
Ndị kasị manụ dịruru ná njọ bụ mgbe gị na iPad na iPhone-agba ọsọ nke ohere nchekwa na ị pụghị pịa photos, nweta nkwalite ma ọ bụ wụnye ọhụrụ ngwa ebe ọ bụ na OTA kwesịrị a free ohere nchekwa of3.1GB.
Nzọụkwụ # 1: Hichapụ égwu Ị adịghị mkpa
Isi abamuru nke ihichapụ ngwa ọdịnala bụ eziokwu na ị pụrụ onwe ruo 500MB enweghị agbalịsi ukwuu mgbalị. Ka ihichapụ, pịa akara ngosi, na-eche maka nzaghachi, na enweta na X na akaekpe. Ebe ọ bụ na Apple ụgbọ mmiri ekwentị na tupu-arụnyere ngwa, iburu n'uche na e nwere ngwa na ndị siri ike ihichapụ.
Nzọụkwụ # 2: Doro Anya foto na vidiyo
Ọ bụrụ na ị a ugboro ugboro ọrụ nke igwefoto, gị Videos na Photos nwere ike ejedebe ewe a otutu ohere. Nke a abụghị na-ekwu na i kwesịrị ịkwụsị ịṅụ ụfọdụ foto na vidiyo, ndụmọdụ kasị mma bụ nyefee ndị a faịlụ gị na kọmputa. Mbubata gị photos, na-eji iPhoto ma ọ bụ Windows 'Video mbubata na inbuilt Pictures. I nwekwara ike mbubata gị foto Dropbox.
Nzọụkwụ # 3: Wepụ Photo Stream
The oyiyi na foto gị na iyi na-adịghị zuru mkpebi, ma ka weghara a otutu ohere. Ọ bụrụ na ị pụrụ inweta mmezi ohere, gbanyụọ gị Photo Stream site na ịga na ntọala, họrọ Igwefoto & Foto na deselect My Photo Stream.
Nzọụkwụ # 4: Hichapụ Ozi
iMessages, ndị na video na foto Mgbakwụnye nwere ike weghara a otutu ohere na-enweghị abịa gị mara. Site mmeghe ndị Ozi na swipe si ikike hapụrụ, ihichapụ iMessage eri. I nwekwara ike ihichapụ ọ bụla ozi n'otu n'otu site na ịme ọpịpị ogologo on a chat afụ, enweta ọzọ wee hichapụ achọghị ozi.
Nzọụkwụ # 5: Wepụ enweghị isi iBooks
Ọ bụrụ na ị nwere iBooks ebudatara gị iPhone, ihichapụ ha arịọrọ na ha ka dị na iCloud.
Nzọụkwụ # 6: Jiri iTunes egwuregwu
Ị ga-enwe ike ige ntị ọ bụla track dị ka gị site na ígwé ojii ma ọ bụrụ na ị na-edebanye aha maka iTunes egwuregwu. Ya mere, ị nwere ike ịzọpụta a otutu ohere si gị iPhone n'ihi na ị na-adịghị mkpa ịzọpụta onye ọ bụla egwu.
Pịa ikpochapụ niile nzuzo na gị iPhone / iPad
Wondershare SafeEraser bụ a pụrụ ịdabere na ndị dị ike na ngwa na-ehicha ọdịnaya nke gị iOS ngwaọrụ. Ọ na-echebe gị data ma ọ bụ ozi mgbe ị chọrọ inye ma ọ bụ resell ekwentị gị. Ọ na-enyekwara ị na-ewepụ ihe niile site otu ebe na mma-mwepụ ụzọ. Usoro ihe omume na-ọma-ruru eru na a sara mbara dịgasị iche iche nke iOS ngwaọrụ, dị ka iPads, iPods na iPhone. Ọzọkwa, e nwere 3 nche etoju na-ehichapụ anya data:
(1) 1-ngafe algọridim, nke bụ nchebe ma na-ewe obere oge iji wuchaa;
(2) na-ajụ-larịị usoro, nke na-eji 2 gafee overwrite faịlụ na data; na
(3) na-adabere ná DOD 5220 ọkọlọtọ, nke na-eme ojiji nke a agha ọkwa technology ihichapu ọmụma.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iOS ngwaọrụ ka na kọmputa
Ẹkedori Wondershare SafeEraser software, họrọ ihichapu niile Data, na pịa ya.
Nzọụkwụ 2. Họrọ data erasing
E nwere 3 etoju nke data erasing. Kpọmkwem an-kpọ ka overwrite gị iOS ngwaọrụ junk faịlụ na-eme ka ụfọdụ na faịlụ na-adịghị recoverable. Ndị kasị mma dị ihe a na-ị na-ewepụ niile data.
Nzọụkwụ 3. Wepụ data na gị iPhone
Ịhọrọ ọkara otu, pịa Malite bọtịnụ ma hụ na ị na kwadoo gị data na-ịga n'ihu. Pịnye gosiri na ndenye igbe. Ozugbo mere, pịa Kwenye. Ebe a, usoro ihe omume amalite erasing niile data dị ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 4. Iji iOS ngwaọrụ
Mgbe ha na-ehichapu kpamkpam, ọ ga-abụ dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ.
Olee otú Kọwaa Cache on iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus
> Resource> ihichapu> Full Guide to Kọwaa ekwentị gị